डिजिटल वानकी कञ्चन : नेपालमा सिकेको सिप र दक्षता काम लाग्छ अमेरिकामा « Khasokhas Follow @khasokhasmag
डिजिटल वानकी कञ्चन : नेपालमा सिकेको सिप र दक्षता काम लाग्छ अमेरिकामा
प्रकाशित मिति : भाद्र १, २०७३ बुधबार
खसोखास साप्ताहिक / न्युयोर्क
कञ्चन केसी अमेरिकामा बस्न थालेको झण्डै तीनमहिना भयो । तर तीनमहिनामा नै उनले अमेरिकामा आफ्नो पेशागत परिचय बनाएकी छिन्, ‘डिजिटल वानकी कञ्चन’ । उसो त ट्राभल व्यवसायीका रुपमा उनको परिचय नौलो होइन । विगत १५ बर्षदेखि उनी यही व्यवसायमा छिन् । नेपालमा अहिले पनि उनको ट्राभल व्यवसाय संचालनमा छ । तर अमेरिकामा आएर तीन महिनाको अवधिमा ट्राभल बिजनेशमा नै आफ्नो पेशागत परिचय बनाउनु सजिलो विषय थिएन ।
धेरैले युएसएलाई ‘यु स्टार्ट अगेन’का रुपमा व्याख्या गर्छन् । अर्थात् नेपालमा जुनसुकै सिप भएपनि अमेरिकामा आइसकेपछि सबै विर्सिएर पुन करिअरको थालनी गर्नुपर्ने धेरैजसोको बुझाई छ । तर नेपालका सिकेको व्यवसायिक सिप अमेरिकामा पनि उत्तिकै काम लाग्छ भन्ने कुराको उदाहरण बनेकी छिन् कञ्चन । ज्याक्सनहाइटको ७२ र ७३ स्ट्रीटको बीचमा रुजभेल्ट एभिन्युमा रहेको डिजिटल वान ट्राभलमा भेटिन्छिन् उनी । यो ट्राभल एजेन्सी उनको आफ्नै होइन, यसमा काम गर्छिन् उनी । तर न्युयोर्कका नेपालीहरुमाझ उनी ‘डिजिटल वानकी कञ्चन’ को परिचय बनाएकी छिन् ।
अमेरिका आउनु अगाडि राम्रो र उपयुक्त सिप सिकेमा अमेरिका आइसकेपछि त्यती धेरै दुख झेल्नु नपर्ने कुराको प्रमाण बनेकी छिन् उनी । निकै स्मार्ट उनले यो कुरा नबुझेकी होइनन् । सन् २००७ देखि नै अमेरिका आउनजान थालेकी उनले अमेरिकामा रहेको समाजलाई अमेरिकामा स्थायीरुपमा बसोबास गर्ने सोंच बनाउनु अगाडि नै बुझेकी थिइन् । आफैले ट्राभल व्यवसाय संचालन गरेर ८ बर्ष आफै बसेर चलाएकी कञ्चनले अमेरिका आएपछि कामको खोजीमा धेरै भौतारिनु परेन ।
कञ्चन सम्झिन्छिन् –‘अमेरिकामा पनि ट्राभल एजेन्सीमा नै काम गर्ने सोंचले आएकी थिइन । तर आफू दक्ष भएकै करिअरमा आइपुगें । अमेरिका आउनासाथ काम खोज्न जाँदा सामान्य अन्तरवार्तापछि नै मलाई कुनै परिक्षण नगरी राखियो । आफ्नो क्षमता भएको काममा नै अगाडि बढ्ने हो भने जीवनमा खासै दुख नहुँदो रहेछ । अब त मेरो करिअर र प्रोफेसन नै यही भयो । नेपालमा ट्राभल व्यवसाय गर्दागर्दै मलाई यसैमा रुची भयो । पब्लिक रिलेशनमा सानैदेखि रुची भएकाले मन यसैमा बस्यो । मिडियामा रुची थियो तर समयले यता धकेल्यो । अहिले पनि नेपालमा मेरो आफ्नै ट्राभल एजेन्सीमा बीस जना जति स्टाफ छन् ।
कुनै विषयमा व्यवसायिक दक्षता हासिल गरेमा नेपाल र अमेरिकामा काम गर्ने तौरतारिका धेरै भिन्न नभएको अनुभव छ उनको । ट्राभल एजेन्सीमा पनि काम गर्दा प्राय सिस्टम एउटै खालको रहेको उनको भनाई छ । उनको कन्फिडेन्ट र ग्राहकसँग घुलमिल भएर सेवा प्रदान गर्न सक्ने शैली नै उनको करिअरमा सबैभन्दा सहयोगी पक्ष हो । त्यसैले उनले तीनमहिनाको अवधिमा झण्डै चारसय जना त नेपालीको मात्रै टिकट काटिसकेकी छिन् । त्यो बाहेक उनी बंगालादेशी र अन्य मूलका ग्राहकसँग पनि डिल गर्न माहिर छिन् ।
बंगालादेशी मूलका ग्राहकसँग डिल गर्दा भाषाको समस्या हुँदैन ? प्रश्न भूईमा खस्न नपाउँदै कञ्चनले जवाफ दिइन् –‘हुँदैन । किनभने मैले उनीहरुको भाषा पनि सिकिसकेकी छु । मान्छेले हेरेर पनि धेरै सिक्न सक्छ । मलाई नेपाली भषा त आउँछ तर बंगाली पनि सिकौं भन्ने लाग्यो । पहिले सुरुमा बंगालीमा अभिवादन सिकें । अनि बिस्तारै अरु शब्दहरु सिक्दै गएँ । प्रत्येक दिन एउटा एउटा शब्द सिक्दै गएँ । मैले ट्राभल एजेन्सी र टिकटसँग सम्बन्धित शब्दहरु सिक्दै गएँ । अहिले उनीहरुसँग कम्युनिकेट गर्न कुनै समस्या छैन ।’
अमेरिकामा केही नेपाली ट्राभल एजेन्सीहरुबाट नेपालीहरु ठगिदै आएका छन् । त्यसैले ट्राभल एजेन्सीप्रति कैयन नेपालीहरुको विश्वास गुम्दो थियो । तर गुमेको विश्वास फर्काउन आफू केही हदसम्म सफल भएको दावी छ कञ्चनको । उनी भन्छिन् –‘सुरुका दिनमा सोंचेजस्तो सजिलो थिएन । ठगीका केसहरु भएका कारण अमेरिकाको नेपाली मार्केट बिग्रिसकेको रहेछ । नेपालीले नेपालीलाई ठगेको र डूबाएको अवस्था भएकाले नेपालीहरुमा अनलाइनमा टिकट किन्ने बानी बस्दै गएको रहेछ । अनलाइनबाट सस्तो पाइने भएकाले एजेन्सीमा किन धाउने भन्ने धारणा बसिसकेको रहेछ । तर मैले केहीहदसम्म गुमेको विश्वास फर्काउन सफल भएकी छु । एकबर्षमा राम्रो फ्रेमवर्क गरेर ज्याक्सनहाइटमा व्यवसायी बन्नेछु भन्ने आत्मबल छ । ’
अनलाइनमा टिकट नकिनेर किन तपाईहरुसँग किन्ने त ? प्रश्नको जवाफमा कञ्चन भन्छिन् –‘अनलाइनमा टिकट काट्दा टिकट चेन्ज गर्नुपरेमा वा रिफण्ड गर्नुपरेमा धेरै समस्या हुन्छ । अर्कोतर्फ हामी अनलाइन भन्दा सस्तो मूल्यको टिकटको ग्यारेन्टी गछौं । हामीले एयरलाइन्ससँग टार्गेट बेसिसमा काम गछौं । हजारवटा टिकट यति महिनामा बेच्छौं भनेर टार्गेटमा काम गछौं । त्यसको फल एकबर्षमा लिन्छौं । त्यो कुनै पनि अनलाइनले दिन सक्दैन । टिकट परिवर्तन गर्नुपरेमा वा कुनै समस्या परेमा अनलाइनसँग कुरा गरेर समस्या समाधान गर्न निकै झमेला हुन्छ, हामीसँग त्यस्तो झमेला हुँदैन । हामीले फोनबाट सहजै सेवा दिन्छौं ।’
अहिलेका ग्राहकहरु त्यती सोझा छैनन् । उनीहरु अनलाइनमा चेक गरेर त्यो भन्दा सस्तोमा पाएमात्र ट्राभल एजेन्सीमा टिकट किन्न जान्छन् । त्यसबारे कञ्चनको अनुभव पनि त्यस्तै छ । उनी भन्छिन् –‘अहिलेका ग्राहकहरु हातमा अनलाइन टिकट बेच्ने एप्स बोकेर आउनुहुन्छ । अनलाइनमा देखाएको भन्दा सस्तोमा पाएमात्र टिकट किन्नुहुन्छ । अनलाइनमा टिकट काट्ने नेपालीहरुले हामीसँग टिकट काट्दा त्यो भन्दा सस्तोमा पाउनुभएको छ । उहाँहरु खुशी पनि हुनुहुन्छ । एकजनाले १० जनासम्म लिएर आउनुभएको छ । हामीले थोरै रकममा राम्रो टिकट उपलब्ध गराउदा ग्राहकले बचेको रकमले नेपालमा राम्रो तरिकाले घुमफिर गर्न पाउनुभएको छ ।’
न्युयोर्कको ज्याक्सनहाइट आसपासमा कैयन ट्राभल एजेन्सीहरु छन् । नेपालीका ट्राभल एजेन्सीहरु पनि उल्लेख्यमात्रामा छन् । तर सबैको भन्दा आफ्नो सेवा राम्रो भएको दावी छ कञ्चनको । उनी भन्छिन् –‘कैयन ट्राभल एजेन्सीले टिकटको टार्गेट फेयर मिट गर्न सक्दैनन् । एकैपटकमा धनी हुने सपना हुन्छ । डेटचेन्जमा धेरै पैसा कमाउदा ग्राहक भड्किन्छ । तर हामी त्यसो गर्दैनौं । डेटचेन्ज गर्दा दुईसय डलर लाग्नेमा दुईसय डलर नै लिन्छौं ।’
कहिलेकाँही उडानसमय रातीमा हुने भएकाले राती राती ग्राहकको फोन आउँदा परिवारबाट कुनै समस्या हुँदैन ? कञ्चन भन्छिन् –‘राती १२ बजे फोन आउँदा किन फोन आयो भनेर परिवारबाट प्रश्न उठ्छ भने यो व्यवसाय कठिन हुन्छ । किनभने एयरपोर्टको टाइमनै बेलुका हुन्छ प्राय । १२ बजे एयरपोर्टमा चेकिंग गर्दा समस्या हुनसक्छ । सुरुमम मलाई पनि परिवारलाई बुझाउन गाह्रो भयो । तर कामको लगनशिलताले गर्दा मेरो परिवार कन्भिन्स छ । परिवारबाट पूरै सपोर्ट पनि छ । खुशी छु ।’